China Carbomer971 mveliso kunye nabenzi | Yinuoxin
I-viscisiti:2000 ～ 11000 mPa.s
Heavy Metal ippm: 20ppm
Isinyibilikisi esisele%: 60ppm
Umthamo ocetyiswayo weCarbopol 971: 0.2-1.0%
I-Electrolyte equkethe i-emulsion yokhathalelo lolusu, i-krimu, ijeli ebonakalayo ekukho kuyo utywala, ijeli yokhathalelo lolusu ebonakalayo, ijeli yokuthambisa iinwele, ishampu kunye nejeli yeshawa.
Iimpawu:Inokuvelisa i-emulsion esisigxina nge-viscosity esezantsi, kwaye i-colloid eveliswe ngokumiswa inokukhanya okuphezulu. Ilungele ukulawulwa ngomlomo kunye nokuhanjiswa okutsha kweziyobisi, ukulawulwa kokukhutshwa kwematriki kunye nearhente yokunqumamisa.
Igama lendlela: Ukuchongwa kwe-carbomer ye-carbomer potentiometric titration
Ubungakanani besicelo: le ndlela isebenzisa ukubonwa kwe-potentiometric ukumisela umxholo we-carbomer.
Le ndlela ifanelekile kwi-carbomer.
Umgaqo wendlela: isampulu yachithwa emanzini, yahluzwa nge-sodium hydroxide titrant ngokwendlela ye-potentiometric titration, kwaye umxholo we-carbomer wabalwa.
2. Isisombululo se-sodium hydroxide titration (0.25mol / l)
3. Isalathiso se-potassium hydrogen phthalate
Izixhobo: Isampulu yokulungiselela: 1. Isisombululo se-sodium hydroxide titration (0.25 mol / L)
Ukulungiselela: thatha i-1.4ml yesisombululo esisicwecwe se-sodium hydroxide kwaye ungeze amanzi abandayo abilayo ukuyenza i-1000ml.
NONEthatha malunga ne-0.6g ireferensi ye-potassium hydrogen phthalate eyomileyo kwi-105 constant kubunzima obungaguquguqukiyo, uyilinganise ngokuchanekileyo, yongeza i-50ml yamanzi abandayo asanda kubiliswa, uyihlukuhle ukuze inyibilike kangangoko kunokwenzeka; yongeza amaconsi ama-2 esisombululo sesalathi se-phenolphthalein, thambisa ngesi sisombululo, xa usondela kwindawo yokuphela, yenza i-potassium hydrogen phthalate inyibilike ngokupheleleyo, titrate de isisombululo sijike sibe pinki. Yonke i-1ml ye-sodium hydroxide titrant (0.25mol / l) ilingana ne-51.05mg potassium hydrogen phthalate. Ngokwesisombululo kunye nokusetyenziswa kwe potassium hydrogen phthalate, isisombululo sibalwa.
Ukugcina:yifake kwibhotile yeplastiki yeplastiki kwaye uyigcine itywinwe; kukho imingxunya emibini kwiplagi, ityhubhu yeglasi enye ifakwe emngxunyeni ngamnye, ityhubhu enye inxulunyaniswe netyhubhu yekalika yesodiyamu, kwaye ityhubhu enye isetyenziselwa ukufunxa ulwelo.
Amanyathelo okuSebenza:thatha malunga ne-0.4g yale mveliso, yilinganise ngokuchanekileyo, uyisasaze emanzini e-400ml, ugxobhoze ukuyinyibilikisa, titrate nge-sodium hydroxide titrant (0.25mol / l) ngokwendlela ye-potentiometric titration method (kwindawo yokugqibela, vuselela ubuncinci imizuzu emi-2 emva kwethontsi ngalinye). Yonke i-1ml ye-sodium hydroxide titrant (0.25mol / l) ilingana ne-11.25mg ye-COOH.
Qaphela 1: “Ubunzima obuchanekileyo” kuthetha ukuba ubunzima kufuneka buchaneke kwisinye sewaka lobunzima, kwaye “umlinganiso ochanekileyo” uthetha ukuba ukuchaneka komthamo wokulinganisa kufuneka kuhlangane neemfuno ezichanekileyo zomgangatho kazwelonke wombhobho wepipette.
Ngokuphawula:Inkampani yethu ikwabonelela ngeendlela ezahlukeneyo zeCarbopol.